Video: Soomaaliya ‘oo gashay xaalad la mid ah tii lagu dilay’ madaxweyne Cabdirashiid - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalVideo: Soomaaliya ‘oo gashay xaalad la mid ah tii lagu dilay’ madaxweyne Cabdirashiid
November 9, 2021 News Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 4
Dr. Cabdiraxmaan Cabdullahi Baadiyow oo ka hadlay khilaafka iyo boobka lagu sameeyo doorashooyinka ayaa sheegay inay ka dhashaan gabood fallo waaweyn, sidii horay uga dhacday dalkeenna, hadana ka taagan, sidoo kale waxuu tusaale u soo qaatay khalalaasaha ka dhashay boobka doorashooyinka ee ka taagan dalal ay ku jirto Itoobiya.
Midkan madaxiisa aad mooddo in Jadeeco hayso ma horoglayaashii madhibaan baa? Majeerteen waxay ku oran ka leexda Boqortoyo weeyaane
Kkkkkn kkkk kkkk weligiin ma maqasheen majeerteen Juxa? Kkkkk
Ninyohow hore waan ku salaamay, waana dhab in qof walbaa yeesho fikrad isaga u gaar ah, balse ninyohow waxaan ku weydiiyay oo laga yaabo in dad badan ay horey kuu weydiiyeen, miyadaan aqoon wax aan xumaan iyo cay ahayn?
Maalnin walba qof baad saaran tahay sidii xajiintii, afxumada waa lagu xajiimoodaa, qofkana way liidisaa.
Bal waxba kaa dhibi maysee isku day inaad maalin qudha wanaag iyo af-wanaagsan ku shaysato, ileyn dadku way ku nacayaane.
1- bal horta fiiri qofka aad wax ka sheegayso, ma qof weyn baa ma mid xun baa, wax adiga makuu dhimay, isweydii.
2- tan labaad bal wanaagiisa iyo xumihiisa isu miisaaan, oo banii aadam bashar kaddii baa la haye, u roonoow oo marka hore aamin in uu qofkani wanagsan yahay.
3- tan sadexaad waxaa la yiri alxasadu ya’kulu al xasanaat.
4- Waalid markaad caayayso fiiri sidaad dareemi lahayd hadii adiga hooyadaa hortaada lagu caayo.
5- Qabiil dhan ma wada xumaan karaan, kala saar dadka, sababna qofka wax uga sheeg, dalku waa ina wadaa qaadaaye. Hadaadse doonto marka hore shisheeyayaha Soomaalida ka soo soke marso.
Ninkii gabyay wuxxuu yiri waayahan Soomaalidu waa wada MICI-KU-DHIIGLE, MIDIG-KU-DHIIGLE, MAJO-KU-DHIIGLE, MADAX-KU-DHIIGLE, MIDI-KU-DHIIGLE, IYO MORA-KU-DHIIGLE, adiguna wada-ku-dhiigle ha noqon.
Kubadu aday ku ag taal saaxiib.
Sag-Saag adiga iyo Juxa labo horoglaa tihiin, hayb wadaagna waad tihiin.
Hadal jilicsan iyo hawraar nugul hore hiddaad u leedihiin, Awlal baa kaa bahan Advice iyo tilman, Horogle iyo warday sheegata ah oo isir Abba ku arooro ilmo hunnuf haanuf iyo dhashii horweeyshe sidee ila hadashaa?
Is ururi xoolo nool baad tahaye, kaftanka Adoo kale ma gayo in laga koobiyana ma bannaano, orod raadso mid sidaada liicsan Dalbo luujo lahayse kkkk kkk kkkk kkkk